Starhopper of SpaceX ayaa dhameystirtay bilawga kowaad ee "raja" - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA SpaceX's Starhopper ayaa soo gabagabeysay bilawgii "rajo" oo bilaabmaya - BGR
Starhopper of SpaceX ayaa soo gabagabeysey bilawga kowaad ee "raja" - BGR
Inta u dhaxaysa tijaabooyinka markabkiisa Dragon Dragon maraakiibta ganacsiga iyo bilawga soo socda ee diyaarinta labaad ee rakaabka weyn Falcon Fal SpaceX waxay leedahay waxyaabo badan oo ay ku bixiyaan maalmo. Inkastoo tan, barnaamijkeeda Starship weli wali la horumarin, taas oo (rajo) ay maalin uun dhalin doonto abuurista isboorti awood u leh inay ku dhex socoto nidaamka qorraxda oo dhan iyo xitaa xitaa in xiddigaha deriska la ah.
waxaa jira, laakiin version yar-yar oo ka mid ah, oo loo yaqaan Starhopper, ayaa jira oo waxa uu gaaray oo kaliya hal mar. Rakaabka quartiriga ah ayaa markii ugu horeysay sameysatay "tijaabo boodbood" rasmi ah, isaga oo si kooban uga soo qaatay soodhaweyntiisa iyada oo xayiraad adagi ay ka hortagtay in ay duullimaadkeeda u duullo.
Imtixaanka boodka ah maaha mid sida caadiga ah loo furo. Boostada weli diyaar uma ahan safarka meelaha bannaan, laakiin SpaceX weli waa inay tijaabisaa mishiinnadeeda iyo nidaamyada kale ee muhiimka ah si ay u arkaan sida ay uga jawaabayaan diiqada dhabta ah. Sidan oo kale, Starhopper waxay ku xiran tahay soodhaweynteeda mudada dheer ee boodka iyo, sida Elon Musk ku xusay tweet, "waxay gaartay xadkeeda", taas oo muujinaysa in ay samaysay waxa ay ahayd. waxaa loo maleynayey inay qabato.
SpaceX ma tiri wax badan oo ku saabsan imtixaankii hore ee tijaabada, laakiin Musk wuxuu xusay "dhammaan nidaamyada cagaaran", taas oo ah hab fiican oo lagu yiraahdo waxba ma jabin .
Nooc kasta oo xayawaan ah oo SpaceX ah oo aan arki doonin iftiinka Maanta, baabuurkan imtixaanka yar yar wuxuu u diyaari doonaa duulimaadka tijaabada ah ee ballaadhan iyo dibedda kaddib. Musk iyo SpaceX ayaa ku doodaya in Starship uu yahay gaadiidka la doorbidayo ee maraakiibta maraakiibta u ah Mars iyo meel ka baxsan, inta badanna waa in la sameeyaa ka hor intaanan run ahayn, horumarka dhabta ah ayaa la sameeyaa.
SpaceX's Falcon Heavy ayaa duulaya maanta Arbacada, waxaan rajeyneynaa - BGR